टेकजो कुराटा - चरित्र प्रोफाइल - पालना दृश्य
कोनो ओटो तोमारे! Kono Oto Tomare! वर्णहरू
by Dima 19th जनवरी 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड टेकजो कुराटामा - चरित्र प्रोफाइल
अवलोकन | चरित्र प्रोफाइल - टेकजो कुराटा
कोराटो Kono Oto Tomare मा main मुख्य पात्रहरु मध्ये एक हो! र कोतोसँग खेल्दछ होजुकी र कुडो। उसले सुरुमा यी दुईलाई भेट्छ र उनीहरू साथी बन्छन्। यो ती3हुन् जसले पहिलो कोटो क्लब सुरू गर्छन् र हामी अन्य पात्रहरूलाई यसको परिणामको रूपमा जोडिएको देख्छौं। कुराटा सहयोग गर्ने हो कुडो र उसलाई पहिलो एपिसोडमा क्लबमा सम्मिलित हुन अनुमति दिन्छ, त्यसैले ऊ यसमा एक धेरै महत्त्वपूर्ण पात्र हो एनिमे। मा anime श्रृंखला कुराता एक धेरै मनपर्दो र प्रशंसनीय चरित्र हो, केवल कोटो क्लबका अन्य सदस्यहरूका लागि के उत्तम हुन्छ र कोटो खेल्नमा उत्तम बन्न चाहन्छ। कुराताले मद्दत गर्दछ कुडो बाहिर र उसलाई आफैसँग र क्लबमा सामेल हुन दिनुहोस् होजुकी.
स्वरूप र आभा | चरित्र प्रोफाइल - टेकजो कुराटा
यसमा कुराटाको एकदम सामान्य र सामान्य उपस्थिति छ एनिमे र यो दोस्रो श्रृंखलाको अन्त्य सम्म समान रहन्छ। ऊ श्रृंखलामा उसको सामान्य स्कूल गणवेश बाहेक अरू कुनै कुरा लगाउँदैन। उसको खैरो कपाल छोटो छ र कडा लामो कटाईमा राखिएको छ। ऊ पनि सँधै पढ्ने चश्मा लगाउँदछ। उसको आँखा पनि खैरो छ र ती सबै उसको समग्र रूपमा देखा पर्दछ।
उसको उपस्थिति तत्काल कुनै पनि चीज सुस्त छ तर खासमा केहि पनि छैन। हामीले देखेको केही चरित्रको जस्तै उसको उपस्थिति सबै भन्दा सम्बन्धित छ। यो महान छ किनकि यसले हामीलाई सहानुभूति दर्शाउनको लागि पहिलो चरित्र दिन्छ र उसको स्वरूप र आभा त्यो अत्यन्तै सजिलो बनाउँदछ।
व्यक्तित्व | चरित्र प्रोफाइल - टेकजो कुराटा
टेकजोको व्यक्तित्व एनिमेसमा एकदम लोकप्रिय छ, आफूलाई परिचय एपिसोडहरूमा दुबै होजुकी र कुडोसँग। ऊ दयालु छ र आफ्नो साथी चरित्र र कोटो क्लबको लागि के उत्तम हो भन्ने चाहन्छ। उसको राम्रो प्रकृति छ र यो द्वारा याद गरिन्छ होजुकी, त्यती धेरै होइन होजुकी। एनीमेमा उनले आफूलाई एक मनमोहक युवाको रूपमा चित्रण गर्दछ जुन सबैका लागि सबै भन्दा राम्रो छ, सबैभन्दा माथि उनी भावुक हुन्छ, विशेष गरी कोटोको बारेमा, जस्तै होजुकी र चिका। टेकजोको उत्कटता के हो उसलाई ड्राइभ गर्दछ र यो पनि हो जुन अर्को ड्राइभ गर्न थाल्छ वर्ण श्रृंखला बढ्दै जाँदा।
ईतिहास | चरित्र प्रोफाइल - टेकजो कुराटा
ईतिहासको सन्दर्भमा त्यहाँ बोल्ने धेरै कुरा छैन जस्तो अर्को पात्रको जस्तै anime श्रृंखला। परम्परागत जापानी साधनको बारेमा उनी धेरै जोशिलो भएको महसुस गरे र उनका साथीहरूले आफ्नो रूचि बाँडोस् भन्ने चाहनाले कोराटाले कोटो क्लब सुरु गर्ने भूमिका लिन्छ। चाँडै उसले यो गरे पछि, कुडो पनि क्लबमा सामेल हुन्छ र अरू सदस्यहरू पनि सामेल हुन थाल्छ। चाँडै नै तिनीहरू होजुकीसँग सामेल हुन्छन्, जसले अन्य सदस्यहरूलाई सामेल गराउन प्रयास गर्दछन् जसले उनी सहजै त्यसो गर्छिन्।
यस पछि कोटो क्लब गठन हुन्छ र यो कुराटालाई सबै धन्यवाद छ। नागरिकहरु मा दोस्रो प्रदर्शन प्रदर्शन सम्म कुराता क्लब संग रहन्छ। कुरता यी सबैका बारे धेरै उत्कट छन् र उनले पछि यस सम्बन्धमा केही भाषण दिए। ऊ केहि प्रदर्शनहरु मा र अन्य पात्रहरु संग चिच्याउँछ।
चरित्र आर्क | चरित्र प्रोफाइल - टेकजो कुराटा
टेकजो चरित्रको सन्दर्भमा त्यहाँ चरित्र चाप धेरै छैन किनकि ऊ एनिमेसको माध्यमबाट प्रायः उस्तै रहन्छ। संग होजुकी यसको Tsundere चाप र संग कुडो यसको क्रोध र न्यानो चाप, कुराटा संग यो केही फरक छ। कुराता एक नर्वस ड्रेकको रूपमा सुरू हुन्छ, जसले स्कूलको दर्शकहरूको अगाडि प्रदर्शन गर्न पनि सक्दैन, धेरै डराउने र डराउँदैनन्। स्पष्ट रूपमा यो सुरूको एक ठूलो समस्या हो anime श्रृंखला यद्यपि यो पछि परिवर्तन हुन्छ।
पछि श्रृंखलामा उसले आफूलाई कम्पोज गर्‍यो जब कोटो क्लबले अरू ठूला दर्शकहरूको अगाडि प्रदर्शन गर्न थाल्छ र उसले आफ्नो नर्भस पमलाई साकार गर्छ। यो मुख्यतया तल थियो होजुकी र कुडो उसलाई सहयोग गर्दै।
कोनो Oto Tomare मा चरित्र महत्व! | चरित्र प्रोफाइल - Kono Oto Tomare!
कुराता खेल्छ (जस्तो होजुकी र कुडो) एनिमेमा ठूलो अंश किनभने उनी एक हुन् जसले कोटो क्लब सुरु गर्दछ, जसले उसलाई क्लब वास्तवमा अवस्थित रहेको एक मात्र कारण बनायो। कुराताबिना कथा दुई खुट्टामा उभिने छैन त्यसैले उहाँ यसमा एक महत्त्वपूर्ण पात्र हुनुहुन्छ एनिमे। कुराता दुबै कोतो क्लब सुरु गर्दछ र अनुमति दिन्छ कुडो र होजुकी नागरिकताका लागि भर्नाको साथसाथै उनीहरूसँग शामिल हुनुहोस्। यो कुरातको जोशिलो हो जसले चासो जगायो होजुकी र यो कुराटाको दृढ संकल्प हो जुन ड्राइभ गर्दछ र मनाउँछ कुडो अनिच्छुक क्लब मा सामेल गर्न। तपाईं कोनो Oto Tomare को हाम्रो मौसम3पढ्न सक्नुहुन्छ! तल:
कुराताले केही भाषणहरू पनि दिन्छन् जसले क्लबमा सबैको मनोबल बढावा दिन्छ र ऊ यो गर्नमा निकै राम्रो छ र उसले यो सबै बाटोमा सिजन २ को अन्त्य सम्म पुग्छ। आशा छ कि यदि हामी त्यहाँ छ भने यसको अझ धेरै कुरा भेट्नेछौं। 2.तु २ अहिलेको लागि मात्र हामी भन्न सक्छौं।
चिकनाई, जुस, प्रोटीन हल्ला, र अधिकको साथ स्वास्थ्यको लागि तपाईंको ब्लेन्ड गर्नुहोस्! 🍌🍉🍏
एक सक्रिय र स्वस्थ जीवन शैली को लागी एक हुनु पर्छ! 🍏🍎‍♂️ 🍏🍎
Allshoplovers.com मा USB पोर्टेबल ब्लेंडर खरीद गर्नुहोस्
अघिल्लो प्रविष्टि Satowa Hozuki - चरित्र प्रोफाइल
अर्को प्रविष्टि चिका फुजीवारा - चरित्र प्रोफाइल